नर्विचसँग भिड्दै लिभरपुल- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
लिभरपुल — कीर्तिमानी अंक बटुलेर पनि झिनो अन्तरले लिग उपाधि गुमाउन पुगेको लिभरपुलले त्यसको पीडा बिर्सेको थियो युरोपेली च्याम्पियन्स लिग जितेर । लिभरपुलले साँच्चै लिग नजितेको ३० वर्ष भयो ।
यस्तोमा शुक्रबार सुरु हुने इंग्लिस प्रिमियर लिगमा उसको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य यही प्रतियोगिता जित्ने हुनेछ । लिगको पहिलो खेल एनफिल्डमै हुँदै छ । यहाँ भ्रमण गर्ने टिम हो यसैपालि बढुवा भएको नर्विच ।
लिगका अरू प्रतिद्वन्द्वीले यसपल्ट दिल खोलेर नयाँ खेलाडीमा खर्चेको छ, तर योर्गन क्लोपको लिभरपुल भने अविश्वसनीय रूपमा चुपचाप छ । अरू ठूला क्लबले मात्र संयुक्त रूपमा एक अर्ब पाउन्डको हाराहारी खर्चेका छन् । किशोर खेलाडीद्वय सेप भान डेन बर्ग र हार्भे इलियट भने क्लबले किनेको छ, सम्भवतः भविष्यलाई ध्यानमा राखेर अनि स्पेनी गोलरक्षक एडरिनले सिमोन मिग्नोलेटको स्थान लिनेछन् । उनी एलिसन बेकरको सहयोगी हुनेछन् ।
क्लोप मान्छन्, ‘अहिले जति खेलाडी क्लबमा छन् तिनीहरू नै क्लबलाई लिग उपाधि दिलाउन सक्षम र पर्याप्त छन् ।’ पछिल्लो दुई सिजन भने लिरभपुलले २३ करोड पाउन्डभन्दा बढी खेलाडी स्थानान्तरणमा खर्चेको थियो । त्यसै क्रममा त एलिसन, भिर्जिल भान डायक र मोहम्मद सलाहजस्ता खेलाडी आएको । ‘अरू क्लबले खेलाडी किन्यो भन्दैमा त्यसको देखासिखी गर्नु जस्तो मूर्ख काम अरू केही पनि हुन्न,’ क्लोपले स्काई स्पोर्टसलाई भनेका छन् ।
उनको मत हो, अहिले लिभरपुल टिम जस्तो छ, त्यसमा किन अरू कोही नयाँ खेलाडी चाहियो र ? सम्भवतः पछिल्लो लिगमा टिमले जसरी खेल्यो । त्यो एकप्रकारले उत्तर पनि हो, किन लिभरपुलले नयाँ खेलाडीमा रूचि राखेन भनेर । खासमा लिगमा ९७ अंक बटुल्ने हो भने कुनै पनि अवसरमा उपाधि जित्न सकिन्छ । मात्र पछिल्ला दुई सिजन छाड्ने हो भने ।
यी दुई सिजन भने पेप ग्वार्डिओलाको म्यानचेस्टर सिटी गज्जब रह्यो । नयाँ उचाइको मापदण्ड कायम राख्यो । सिटीले भने ठीक यही बेला टिम अझ बलियो बनाएको छ । त्यसमाथि गत सिजन टोलीले तीन उपाधि जितेर नयाँ कीर्तिमान पनि राखेको छ । सिटीको यसपल्ट सबैभन्दा ठूलो अनुबन्ध हो, स्पेनी मिडफिल्डर रोड्री ।
गत सातामात्र यही टिमले कम्युनिटी सिल्डमा लिभरपुललाई टाइब्रेकरमा हराएको थियो । तर यसको लिगमा खासै अर्थ हुन्न । लिभरपुलको एउटा चिन्ता के हुनसक्छ भने प्रमुख तीन खेलाडी सलाह, रोबर्टो फिर्मिनो र साडियो माने आफ्नो देशका लागि खुबै व्यस्त रहे सिजन विश्राममा ।
उनीहरू चम्केनन् भने के हुन्छ त ? क्लोप मान्छन्, यसपल्ट एलेक्स अक्सलेड च्याम्बरलिन, एडम लालाना र रिहान ब्रेस्टरको उपस्थितिले ठूलो अर्थ राख्नेछ । लिभरपुल स्वयं यस सिजन खुबै व्यस्त रहनेछ ।
युरोपेली विजेताका रूपमा लिभरपुलले यूईएफए सुपर कप अर्को साता खेल्दै छ भने अर्को महिना क्लब वर्ल्डकप पनि छ । त्यसको अर्थ लिभरपुलले यस सिजनमा अझै ६ उपाधिका लागि खेल्नेछ । भनिरहनु पर्दैन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यही लिग उपाधि नै हुनेछ । प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:०८
लन्डन — प्रिमियर लिगको ट्रान्सफरको अन्तिम दिन टोटेनहमले जिओभानी लो सेल्सो र रायन सेसेनगोनलाई भित्र्याउने क्रम अन्तिममा पुर्‍याएको छ । तर पाउलो डिबालालाई ल्याउने उनीहरूको सम्भावना मधुरो बनेको छ ।
उत्तरी लन्डनको अर्को टोली आर्सनलले सेल्टिकबाट लेफ्ट ब्याक किइरन टिइर्नी र चेल्सीबाट सेन्टर ब्याक डेबिड लुइजलाई ल्याएर खेलाडी सरुवाको अन्तिम दिन आफूलाई व्यस्त राखेको छ । म्यानचेस्टर युनाइटेडका स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकुलाई इन्टर मिलानले लिने निश्चित भएको छ । म्यानचेस्टरले राखेको ८ करोड युरो प्रस्ताव इन्टरले स्विकारिसकेको छ ।
लुकाकु बिहीबार बिहानै नयाँ सरुवालाई टुंग्याउन मिलान पुगिसकेका थिए । यस्तोमा युनाइटेडलाई उनको स्थान लिने खेलाडी समय पाउन गाह्रो पर्नसक्छ । युनाइटेडले युभेन्ट्सका मारियो मान्डजुकिजलाई लिन खोजे पनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेन ।
६२ हजार क्षमताको नयाँ रंगशालामा सर्नुका साथै च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा पुगेपछि व्यवस्थापक माउरिसियो पोचेटिनोले टोटेनहमका प्रमुख डानियल लेभीमाथि दबाब तेर्स्याउँदै आएका थिए ।
टोलीले यस सिजनका लागि अहिलेसम्म फ्रान्सेली मिडफिल्डर टान्गुए एनडोम्बेलेलाई लियोनबाट मात्र लिएको छ, त्यो पनि क्लबको कीर्तिमानीयुक्त रकममा । ट्रान्सफर विन्डो बिहीबार मध्यरातमा बन्दा हुँदा टोटेनहममा अन्य धेरै खेलाडी आइसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
अर्जेन्टिनाका अन्तर्राष्ट्रिय मिडफिल्डर लो सेल्सो एक सिजनका लागि लोनमा टोटेनहम आउने सम्भावना छ । तर अर्को सिजनमा उनको स्थायी सरुवा हुनसक्ने सम्झौतामा रहेको छ । इंग्ल्यान्ड यू–२१ का सेसेनगोनलाई टोटेनहमले २ करोड ५० लाख पाउन्डमा लिएको हो, जुन बढेर ३ करोड पनि पुग्न सक्नेछ । तर डिबालालाई ल्याउने प्रक्रिया भने रोकिएको छ । लुकाकुलाई लिन नपाएपछि युभेन्ट्सले डिबालालाई टोटनहम जानबाट रोकेको हो । डिबालालाई पठाएमा उनको विकल्प तयार राख्न युभेन्ट्सले खोजेको थियो ।
गत सिजनमा आर्सनलले प्रिमियर लिगमा ५१ गोल खर्चेको थियो र लगातार तेस्रोपल्ट च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुन असफल भएको थियो । त्यसैले टोली रक्षापंक्ति बलियो बनाउने दाउमा छ । टिइर्नी बुधबार नै लन्डन पुगेका थिए । उनको २ करोड ५० लाख पाउन्ड सम्झौता रकमलाई लिएर दुवै क्लबले सहमति जनाइसकेका छन ।
अब ५ वर्षको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनेक्रममा छ । लुइज लन्डनको अर्को टोलीमा जान लागेका हुन् । आर्सनलका कप्तान लाउरेन्ट कोस्सीइल्नी यसै साता बोर्डे लागेपछि आर्सनलले लुइजलाई चेल्सीबाट ८० लाख पाउन्डमा लिएको हो ।
युभेन्ट्सबाट राइट ब्याक जाओ कान्सेलोलाई लिएपछि प्रिमियर लिग च्याम्पियन्स म्यानचेस्टर सिटीले अर्को खेलाडी लिने सम्भावना कम छ । युरोपिनय च्याम्पियन्स लिभरपुलका व्यवस्थापक योर्गन क्लोपले थप खेलाडी लिन हतार नरहेको जनाएका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:०४
च्याम्पियन्स लिगको ड्र निकालियो
लिन डानको संन्यासपछि...
भूमिकाविहीन बने जिल्ला खेलकुद समिति
इस्पान्योलको दुःखद पतन
सेभियाको लगातार तेस्रो जित